एक तेस्रो भन्दा बढी को जोडे विवाहित बीच र, अनलाइन भेट हुनेछ । यी परिणाम मा दिइएको लेख को विश्वविद्यालय देखि शोधकर्ताओं को शिकागो, मा हालै प्रकाशित पत्रिका»विज्ञान». साथै, शोधकर्ताओं फेला कि ती फेला जो एक प्राण जोडीलाई नेटवर्क मा, अन्त मा, अधिक आनन्दित पारिवारिक जीवन, र ती विवाह रहने अब ।
पहिलो लेखक को लेख, यूहन्ना वार्ता बारे अध्ययन:»हाम्रो निष्कर्ष सुझाव इन्टरनेट दक्षता सुधार गर्न सक्छन् र गुणवत्ता को डेटिङ र पछि विवाह।»
अनलाइन डेटिङ हालै भएको अत्यन्तै तेज-बढ्दै बाटो पाउन एक पति. यो विधि को प्रभाव, भन्छन्, एक तेजी विकास, सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न तरिकामा तत्काल संदेश र -मेल, चर्चा, बहु अनलाइन खेल र अन्य भर्चुअल संसारहरू मा जो प्रयोगकर्ता कुराकानी माध्यम स्थापित»तस्वीर»छ ।
यस अध्ययन मा यूहन्ना र आफ्नो सहयोगिहरु विश्लेषण को परिणाम एक विशाल नमूना — मान्छे मा भाग लिए सर्वेक्षण बारेमा कसरी सन्तुष्ट तिनीहरूले संग आफ्नो विवाह र कसरी लामो रहन्छ छ । उत्तरदाताहरूलाई, विशेष मा, कसरी तिनीहरूले खुसीसाथ विवाह, कसरी आफ्नो उच्च स्तर को संलग्न गर्न, आफ्नो पत्नी कति समय तिनीहरूले सँगै खर्च र कति प्रेम प्रत्येक अन्य ।
को भाग मा नमूना त्यो अनलाइन भेट थियो वरिपरि, जबकि दम्पतीले भेट गर्ने मित्र को कम्पनी मा, काम मा, एक क्लब मा वा अन्य ठाउँमा, राशि लगभग.
फरक सानो छ, तर दिइएको नमूना आकार यो महत्वपूर्ण थियो
त्यस्तै महत्वपूर्ण छ, र बीच फरक मूल्यांकन को सन्तुष्टि संग विवाह को. अंक लागि अनलाइन डेटिङ र, — डेटिङ वास्तविक जीवन मा.
मा प्रश्न कहाँ को यो जोडी, भेट गर्न दिइएको थियो, धेरै फरक जवाफ छ । बारे प्रतिशत भेट मा एक विशेष डेटिङ साइट छन् । साथै, यी मानिसहरू सामान्यतया हौं वृद्ध उमेर समूह माथि वर्ष छ । रोजे खोजी गर्न दोस्रो आधा मा वास्तविक जीवन फेला, उनको स्कूलमा, काम, चर्च, क्लब, बार मा, विशेष समर्पित दल डेटिङ गर्न र यति मा । चाखलाग्दो कुरा, कम से कम सफल विवाह पछि थिए परिचितों पट्टी मा, र अनलाइन डेटिङ छ सायद सबैभन्दा खराब ठाँउ सम्भव विचार गर्न भर्चुअल खेल भयो ।
कसरी पूरा गर्न एक केटी वा केटा इन्टरनेट मा? त्यहाँ केही सजिलो छ । धेरै छन् डेटिङ साइटहरु र दर्शक तिनीहरूले साँच्चै ठूलो छ । सबैभन्दा प्रसिद्ध वेबसाइट मा खाता मा प्रयोगकर्ता लाखौं छ । दैनिक — लाख प्रयोगकर्ता कम्प्युटर मा बारी र भ्रमण डेटिङ साइटहरु को खोज मा आफ्नो आधा छ । धेरै साइटहरु मा बदल सामाजिक नेटवर्क, जहाँ मान्छे छन्, बस ब्राउजिङ प्रोफाइल र म आशा पूरा गर्न कसैले तिनीहरूले छन्, प्रसारण कुरा मा फोरम, लेख्न. साइटहरु एक ठूलो-मात्रा, समुदाय एकजुट मान्छे संग नै चासो छ । कसरी गम्भीर इन्टरनेट डेटिङ? कुनै सही तथ्याङ्क रूपमा, मान्छे अनलाइन भेट छैन, रिपोर्ट को परिणाम मा सभाहरूमा. किन तपाईं गर्नुपर्छ भर सर्वेक्षण डाटा कि डेटिङ साइटहरु नियमित सञ्चालन बीचमा आफ्नो प्रयोगकर्ता । त्यहाँ भएको छ एक उत्सुक तथ्याङ्क छ भन्ने दाबी, मात्र हाम्रो देश मा हरेक दिन त्यहाँ छन्, लगभग विवाह गर्ने मान्छे बीच भेट.
छोडपत्र को दर जोडे बीचमा फेला जो प्रत्येक अन्य, नेटवर्क मा भन्दा अलि कम गर्नेहरूलाई बीचमा भेट अफलाइन, फरक छ, लगभग छ ।
← अनलाइन च्याट निःशुल्क
फ्रान्सेली बालिका - मिति देखि बालिका फ्रान्स →